Tilmaamaha ugu dambeeya ee milkiiluhu u leeyahay Alaskan Malamute - Taranka
Mulkiile kasta hagaha ugu dambeeya ee Alaskan Malamute
Si kalgacal loogu yeedhay Xumaan , Alaskan Malamute waa nooc soo jiidasho leh waana nooca candhuufta nooca ugu weyn ee nooca Arctic .
Waxay leeyihiin astaamo u eg yeey oo waa eyyo culus oo shaqo badan oo loo sameeyay inay fogaadaan. Laakiin Malamute-u janjeedha qoysku miyuu ku jiraa xirmadaada? Sii wad duubista giaand oo raadso.
Taariikh: Halkee buu ka yimid Alaskan Malamutes?
Muxuu u eg yahay Alaskan Malamute?
Alaskan Malamutes ma yihiin eeyo qoys oo wanaagsan?
Daryeelkaaga Alaskan Malamute
Caafimaadka: Muddo intee le'eg ayuu noolaa Alaskan Malamute?
Waa imisa qiimaha Alaskan Malamute?
Xaqiiqooyin & Mowduucyo ku saabsan Alaskan Malamute
Jebinta Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka Alaskan Malamutes
Akhris Dheeraad ah: Isku-darka Alaskan Malamute
Ahaansho mid ka mid ah eyda ugu da'da weyn , waxaa la rumeysan yahay in Alaskan Malamutes asal ahaan ka soo jeedo da'da Paleolithic. Taasi waa ugu yaraan 10,000 sano ka hor!
Magacoodu wuxuu ka soo jeedaa reer guuraa Inuit ah oo la yiraahdo 'Mahlemiut.' Waxay horumariyeen taranka si ay u ugaarsadaan shaabadood iyo orso dabacsan, marka laga reebo in eeyaha la riixmay loola jeeday inay jiidaan xamuul culus .
Waxay sidoo kale ahaayeen buste diiran habeenkii.
In kasta oo ay le'eg yihiin, fido-da daacadnimo iyo dabacsan ayaa si dhow ula nool qoysaskooda aadanaha. Nasiib darrose, iyagu waxay u dhawaatay inay dabar go'do intii lagu jiray orodkii dahabka ee 1896.
Tartanka eeyuhu wuxuu ahaa mid cakiran, Alaskan Malamutes waxaa lagala soo gudbay noocyo kale si loo abuuro canine dhaqso badan. Tani waxay horseeday in la khafiifiyo khadka dhiigga ee 'Malamute'.
Taranka waxaa badbaadiyey nin la yiraahdo Arthur Walden, oo bilaabay inuu horumariyo Kotzebue Malamutes . Culayskan gaarka ah waxaa loo gudbiyay Mrs. Ava Seely, ka dibna labo nooc oo kale ayaa muuqday - the M’Loot iyo Hinman .
Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Mals waxaa loo shaqaaleeyay inay rarto xamuulka waxaana loo adeegsaday goob-iyo-samatabbixin. Khilaaf siyaasadeed awgood intii lagu guda jiray safarka Antarctica, eeyahaas waa la burburiyey.
Burburintooda kadib, Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) - oo kaliya aqoonsaday culeyska 'Kotzebue' illaa iyo heerkaas - wuxuu dib u furay diiwaangelintii dhammaan saddexda nooc.
Malamutes wuxuu cadeeyay adkeysigiisa iyo tijaabada waqtiga. Maanta, dhammaan Malleydu waxay ku abtirsadaan Ch Toro ee Bras Coupe , si midaynta dhammaan saddexda nooc .
Waqtiga intiisa badan, Malamutes badanaa waa lagu qaldaa sida ay tahay Siberia Husky inaadeer, laakiin waa noocyo kala duwan .
Sida uu qabo AKC’s heerka caadiga ah , Alaskan Malamutes waa eeyo si fiican u muruqsan oo qalbi qoto dheer leh mowqif faanna leh. Madaxooda ballaadhan waxaa saaran dhagaha saddex geesoodka ah iyo xuub weyn.
Haddii aad ka fekereyso haddii ay sidoo kale yeelan karaan indho buluug ah, waxaa loo tixgeliyaa 'cillad u qalma.' Indhahooda u eg yicibku waa inay ahaadaan bunni ama madow.
Tani waa wax maskaxda lagu hayo haddii aad qorsheyneyso inaad hesho Mal loogu talagalay bandhigyada eyga.
Dhamaadka jirkooda waxaa ku yaal dabo dhogor badan oo u eg tuubbo ruxaya.
Ha moogaanin: Eeyo u eg yeey
Celceliska dhererka & culeyska Alaskan Malamute
Markaad aragto Malamute-buuxa oo qof ag istaagaya, waa ku filan tahay inaad qofkasta dareento cabsi. Sida noocyada kale, bucshiradani waa mid galmo ahaan dimorphic ah - dheddigga ayaa waxyar ka yar ragga .
Malamutes heerkoodu sarreeyo ayaa u dhexeeya 23 iyo 25 inji (58 iyo 63.5 cm) garabka iyo culeyska 75 ilaa 85 rodol (34 illaa 39 kg).
Waxay sidoo kale ku yimaadaan cabbir ka weyn. Waxaa laga yaabaa inaad aragtay a Giant Alaskan Malamute on Facebook ama Instagram, laakiin waxay kori karaan ilaa 35 inji (89 cm) oo miisaankoodu ka weyn yahay 190 rodol (86 kg).
Sidee ku saabsan Gunta yar ee Alaskan Malamutes? Alaskan Klee Kais ayaa loo suuq geeyay sida noocyada yaryar, laakiin dhab ahaantii waa isku dhaf ah oo ah laba nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Huskies'.
Haddii aad u tagto heerka ama weyn ee Malamute, doggo this kuma farxi lahaa guryaha . Waa inay ku noolaadaan guri waasac ah oo ay ku shaqeyn karaan kuna ciyaari karaan si xor ah.
Coat & Color: Ma yihiin Alaskan Malamutes hypoallergenic?
Maya, iyagu xasaasiyad kuma laha. Mals daadi dhexdhexaad ah sanadka oo dhan Oo dharkoodana afuuf xilligooda.
Waxay leeyihiin a jaakad laba jibbaaran oo ka kooban jaakad dusha ka dheer oo xad-dhaaf ah, iyo dhogor-hoosaad, biyo-celiyaha dharka hoose oo lagu sharaxay inuu yahay saliid.
Alaskan Malamutes waxay leeyihiin dhogor dhalaalaya oo leh midabbo kala duwan iyo isku-darka guruud khafiif ah oo leh madow, casaan, iyo hooska midabka leh, oo leh calaamado waji cad . Dhacdooyinka isku-dhafan, midabka kaliya ee adag ee la oggol yahay waa caddaan.
Ha moogaanin: Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Caddaanka naadir ee naadir
Ha u oggolaan in astaamaha kaneecada ee ah inay yihiin kuwo awood badan oo waara ay kaa nixiyaan. Dad badan oo milkiileyaal ah ayaa kuu sheegi doona inay tahay an xayawaan aad u fiican oo loo hayo qoysaska khibrada u leh daryeelka eyga weyn .
Sidoo kale, fadlan tixgeli inay yihiin sirdoon iyo yeey ku abtirsadaan. Sidaa darteed waxay u baahan doonaan inay la joogaan aadanaha oo leh gacan adag laakiin gacal jacayl si ay u tababaraan.
Mid ay u tixgelin karaan inay yihiin xarafka xirmada.
Alaskan Malamutes ma khatar baa?
Xayawaan kasta oo leh ugaarsi ugaarsi wuxuu u eg yahay mid aan la saadaalin karin ama xitaa dagaal badan. Laakiin illaa iyo hadda, tababbarka habboon iyo isdhexgalka hore waxay umuuqdaan inay xallinayaan arrintan.
Inta ugu badan ee ay noqon karaan waa mid ula kac ah.
Waxaa la yaab leh, kuma tiirsanaan kartid Alaskan Malamute inaad noqotid eey waardiye ah maxaa yeelay iyagu waa saaxiibtinimo badan .
Dadka qaar waxay tixgeliyaan Alaskan Malamute inay yihiin dad waawayn oo jilicsan oo xitaa kobcin kara bisadaha. Ka daawo fiidiyowgan sida Niko iyo Phil ay ula falgalaan Milo, bisadda.
Weli waxay leeyihiin a si dabiici ah u ugaadhsade , markaa hubi inaad marwalba kormeerto isdhexgalka ka dhexeeya saaxiibkaa dhogorta leh eeyaha kale, xayawaanka yaryar, iyo gaar ahaan carruurta.
Mals guud ahaan waxay doorbidaa wehel bani'aadamnimada kuwa cadowga ah ee la ciyaara, taas oo ka dhigaysa inay ku fiicnaadaan guri-xayawaan ah oo ay keligood isku koobi karaan.
Haddii aad xayawaankaaga xayawaanka ah u oggolaatid inay is madadaasho, hubi in gurigaaga si ammaan ah loogu lifaaqay dayr dhererkiisu yahay 6 fiit oo dhulka lagu aasay.
Alaskan Malamutes waa qodayaal si fiicanna way u kori karaan. Waa dareen si adag ugu xiran iyaga dhexdooda, marka waa inaad ku noolaataa xaqiiqda ah inaad ku tababbari karto habdhaqankan iyaga ka mid ah.
Waxa aad sameyn karto ayaa ah inaad barato ardaygaaga inuu wax ka qodo goob loogu talagalay.
Alaskan Malamutes wax badan ma ciyey?
Haddii aad qorsheyneyso inaad hesho Alaskan Malamute, waxaa ugu wanaagsan inaad ogaato inay la mid yihiin yeyda oo doorbida inay hadlaan ama cod dheer ku hadaaqaan, oo aan badnayn qeylada.
Diyaar u ahaada cabaadka fadhiyada maxaa yeelay wax kastaa way dejin karaan - seeriga, eeyaha kale oo ciyey, ama markaad si fudud kula hadlayso.
Si aan fikrad kaaga siiyo waxa taasi noqon doonto, fiiri fiidiyowgan Cedar oo la ooyaya saaxiibkiisa yar ee aadanaha.
Way fiicnaan laheyd haddii aadan keligaa ka tagin jinsiyeedkan. Kuma raaxaystaan ​​waqti ku qaadashada kaligood nus maalin, gaar ahaan maalin dhan, haddii kale, waxay noqonayaan kuwo wax dumiya.
Waxaan kugula talineynaa iyaga qoysaska halka had iyo jeer uu jiri doono qof la socda.
Qurxinta, jimicsiga, iyo cuntada ka sokow, waa inaad ogaataa in Alaskan Malamutes yihiin dayactir sare uguna noolaan karin si raaxo leh meel diiran.
Sababtoo ah waxay ku dhasheen inay istaagaan cimilada qabow, waxayna leeyihiin jaakad cufan, wax kasta oo ka sarreeya 80 darajo (26.6 ℃) ayaa loo arkaa inay aad ugu kulul yihiin iyaga.
Waa xayawaan gurijoog ah oo xitaa u baahan lahaa guri qaboojiye leh. Waxaa fiican inaad iska ilaaliso cadceedda oo aad hesho biyo nadiif ah markasta.
Baahiyaha qurxinta ee Alaskan Malamute
Badanaa, Mals waa inay ahaato cadayay laba ilaa saddex jeer usbuucii , laakiin maadaama ay si sanadle ah u dhalaalayaan - guga iyo deyrta - cadayashada waa in lagu sameeyaa maalin kasta iyadoo la isticmaalayo a burush jilicsan ama ah buskudka dharka si loo yareeyo daadinta.
Malamutes ka mid noqda dhacdooyinka isbadalka ayaa usbuuc walba la maydhaa, laakiin sida xayawaannada guryaha ku jira, maahan in badanaa la sameeyo. Haddii aad isweydiineyso in Malamutes uu urayo, maahan, mahadsanid iyaga jaakad gaar ah, jaakad is-nadiifin ah .
Haddii aad ku nooshahay jawi qabow ama nadiif ah, maydhashada eygaaga hal ilaa laba jeer sanadkii waa ku filan tahay .
Sidoo kale waad dhaqi kartaa saaxiibkaa dhogorta leh markii loo baahdo, sida markay wasakh yeelato inta ay shaqeyneyso ama ciyaareyso, laakiin isku day kala bixi ilaa 6 ilaa 8 todobaad marka laga reebo inay kahortagto jaakadeeda inay qalasho
Cadayashada ilkaha waa in la sameeyaa sadex jeer asbuucii, halka dhagaha waa in laga baaraa usbuuc walba caarada iyo calaamadaha cudurka.
Si joogto ah u jar ciddiyaha si ay uga ilaaliso inuu duugoobo oo uusan u dillaacin, taas oo ey xanuun badan ku leh eeyga.
Ku billow jadwalkaan is qurxinta si joogto ah si Malup pup-kaaga uu ula qabsado. Uma baahnid inaad la legdameysid eey weyn si aad u hesho cagihiisa ama ilkaheeda u cadayato.
Cunnada: Maxay cunaan Alaskan Malamutes?
Tirada iyo nooca cuntada eeyga aad quudiso xayawaankaaga waa inuu ku salaysnaadaa culeyska xayawaankaaga, da'da, dheef-shiid kiimikaadka, iyo caafimaadkaaga .
Kibbo qalalan oo tayo sare leh ayaa ah xulasho aad u fiican, laakiin sidoo kale waxaad isku dayi kartaa a cunto cayriin. Qabashada - waa qaali, adag tahay in la diyaariyo, iyo waqti badan.
Sidoo kale waa inaad ogaataa tan cuntooyinka aadanaha waa badbaado oo ammaan uma aha meelaha laga soo galo.
Mals waxaa loo yaqaan 'quudiyayaal fudud' waxayna ku noolaan karaan wax aad u yar. Qiyaastii 2 koob oo ah eeyga cunnadiisa waa inay sameeyaan , laakiin waxay u badan tahay inay u baahan yihiin wax ka yar waxaad bixineyso, markaa isku day inaad yareyso daweeyo , Ka fogow naas-nuujinta, oo u kala qaybi cuntada laba jeer.
Wax ka qabashada zoomyadaada Malamute
Waxay leeyihiin tamar inta ay le'eg tahay, taas oo macnaheedu yahay inay u baahan doonaan kicin badan oo jireed iyo maskaxeed. Ujeeddada ugu yaraan 1 ½ ilaa 2 saacadood oo jimicsi ah maalintii .
Laakiin haddii aad leedahay eey Alaskan Malamute ah, ha dhaafin labadeeda sano ee nolosha ugu horeysa . U oggolow jirkeeda inuu bislaado, gaar ahaan lafaheeda ka hor intaadan u qaadin orodka ama socodka.
Tani waxay sidoo kale ka hortagi kartaa cudurrada sida dysplasia.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso nashaadaadyo kala duwan oo u wanaagsan ilmahaaga dhogorta badan, dabaal tag. Saameyn hoose ayey ku leedahay jirkeeda yar waxayna ka caawineysaa inay ku daato xakameynta.
Ma u baahan tahay qof kaa caawiya howlaha? Malamutes wuxuu jecel yahay ujeeddo ! Kaliya maahan inay ku farxi doonaan qulqulatada ama barafka, laakiin sidoo kale inay shaqo qabtaan.
Malamutes waa eeyo adag oo leh celceliska cimriga 12 ilaa 16 sano . Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan khadadka abtirsiinta ayaa ah inay leeyihiin rikoodh la aasaasay oo ku saabsan waxa loogu talo galay.
Aqoontaani waxay kaa caawin kartaa inaad qaadato tallaabooyinka ka hortagga ah .
Waa liis ballaaran, laakiin macnaheedu maahan in Mal-gaaga lagu damaanad qaadi doono inuu horumariyo mid ama in ka badan oo ka mid ah cudurradan.
Had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa taranka iyo nooca daryeelka ee milkiilayaashoodu siiyaan.
Caafimaadka ilkaha iyo dhibaatooyinka afka
Alaskan Malamutes waxay leeyihiin fursad sare oo ah inay ku dhacaan ilkahooda ilkaha iyo ciridka, sidaa darteed nadaafadda afka ayaa muhiim ah.
Infekshanku wuxuu u keeni karaa dhibaatooyin labaad wadnahooda, beerka, kilyaha, iyo kala-goysyada. Waa xitaa gaabin karaa noloshooda 1 ilaa 3 sano .
Waxay sidoo kale u nugul yihiin ilkaha eyda haynta - marka ilkaha eydu aysan soo dhicin. Waxay kuxirantahay darnaanta, waxay ubaahantahay in laga saaro.
Waxyaabaha ku saabsan tarankaani waxay ka dhigayaan kuwo u nugul cudurada faafa iyo kuwa halista ah sida parvo, raabiyada, iyo distemper .
Ilaa iyo inta aad la socotaan tallaalkeeda, waa inaadan haysan wax aad ka walwasho.
Alopecia X waa cudur maqaarka ku dhaca oo kaliya ku dhaca eeyaha timaha daadanaya - ma ahan cuncun ama xanuun. Waxaa sababa qanjir qanjirka cilladaysan oo si fudud loogu hagaajin karo jeermiska.
Canine kasta oo lagu ogaado xaaladan waa inaan la dhaqin.
Xanuunka Zinc-ka jawaabta waxay sababi kartaa jaakadaada Mal inay u ekaato mid liidata sababo la xiriira yaraanshaha zinc oo lagu daaweeyo zinc supplements .
Qaar badan waxay la mid tahay cambaarta, laakiin waa xaalad u gaar ah eeyaha. Waxaad dareemi doontaa waxyaabo balastar ah oo xoqan oo fiiqan waxaana ku dhici kara infekshannada labaad, oo cuncun doona
Eygaaga ayaa laga yaabaa inuu ka soo baxo ama uu ahaado dhibaato nololeed.
Miisaan-weyni waa walaac caadi ah oo leh eeyo badan oo waaweyn, oo u horseedi kara dhibaatooyin wadajir ah. Tani si fudud ayaa wax looga qaban karaa cunto caafimaad leh iyo qaab nololeed firfircoon.
Ka fogow quudinta qashinkaaga miiska xayawaankaaga. Kaliya tani caafimaad ma ahan, laakiin sidoo kale waxay dhiiri gelin doontaa dabeecadaha aan loo baahnayn sida dawarsiga.
Xusulka iyo sinta dysplasia waa cudur kale oo inta badan noocyada waaweyn ay qabaan. Sidoo kale waxaa sababi kara dhaqso badan oo ay u koraan.
Taasi waa sababta aan ugu talineyno in ardaydu ay ku dhegan yihiin waxqabadyo yar yar oo madadaalo leh si looga fogaado inay isku adkaadaan kala-goysyadooda ka hor inta aysan si buuxda u horumarin.
Da 'kasta ha noqotee, cayilku wuxuu ka sii dari karaa astaamaha sida ku dhibtoodida socodka. Ogaanshaha hore ayaa ka wanaagsan maxaa yeelay, xaaladaha qaarkood, qalliin ayaa loo baahan karaa.
Ciladan hidde-wadaha ah waxaa sababa koritaan aan caadi ahayn, oo maadaama laga dhaxli karo, xirfadleyda badankood kuma talinayaan inay isirtaan.
Malamutes leh ciriiri ayaa ka yaraan doona sidii la filayay. In kasta oo aysan la kulmin wax xanuun ah, iyagu waxay u ekaan doontaa qaab liican .
Eeyaha feeraha laabta sida Alaskan Malamutes ayaa lagu wadaa buro ama caloosha maroojin . Tani waxay noqon kartaa mid dhimasho keenta maxaa yeelay eeygaagu ma soo saari karo hawo saaid ah.
Haddii aad aragto fooshaada oo dib u ceshanaysa iyada oo aan waxba soo kordhineynin, ama aad ku jirto meel tukasho ah muddo dheer, isla markiiba u keen dhakhtarka xoolaha. Qalliin ayaa loo baahan yahay.
Cilladaan neerfaha ayaa u dhinta eeyaha, kuwa ka badbaadaana waxay badanaa u baahan yihiin qalab caawimaad si ay nolol caadi ah ugu noolaadaan. Way adag tahay in lagu ogaado sida astaamaha sida daciifnimada, fal-celin liidata, dheelitirka oo luma, badiyaa waxay soo ifbaxaa markay ardaygu qiyaastii siddeed toddobaad jirsado .
Iska ilaali Polyneuropathy , sidoo kale. Waxay keentaa isku-buuqsanaan oo noqon karta mid fudud ama daran, laakiin aan waligeed dhiman karin.
Haddii aadan heli karin sharaxaad ku saabsan sababta eygu u kordhayo culeyska ama jaakaddeeda ay khafiifayso, waxay noqon kartaa dhibaato qanjirka 'thyroid' oo sababa isu dheelitir la'aanta hormoonka.
Arimaha anshaxa sida gardarada ama cabsida mararka qaarkood way soo muuqan kartaa.
Dhakhtarkaaga aad ku kalsoon tahay ayaa awoodi doona inuu siiyo kaniinigaaga kaniini si uu uga gudbo.
Atrophy Retinal Atrophy (PRA) iyo indho-beelka indhaha ayaa sidoo kale caan ku ah Alaskan Malamutes. In kasta oo kan dambe lagu hagaajin karo qalliin, PRA waa mid aan dib-u-noqosho lahayn waxayna sababi doontaa indho la'aan.
Soosaarayaasha sumcadda leh waxay hubiyaan in keydkooda taranka ay maraan baaritaanka hidda-socodka ee PRA si loo hubiyo inay ka nadiif yihiin cudurkan.
Cilad kale oo indhaha ku dhacda ayaa loo yaqaan Cudurka VKH . Waxaa sii xumeeyay iftiinka qoraxda, mid ka mid ah astaamaheeda ayaa u rogaya midabka madow ee Mal-kaaga mid casaan ah.
Waxay noqon kartaa mid xanuun badan waxayna sababi kartaa indho la'aan.
Waxa kale oo jira indho la’aan maalin ama Hemeralopia. Waxaa lagu gartaa xayawaankaaga xayawaanka ah ee diidan inay galaan qorraxda oo ay dhibaatooyin la kulmaan maalintii oo keliya. Tani waxay badanaa muujisaa qiyaastii da'da siddeed toddobaad.
Suuxdintu badanaa waa la iska dhaxlaa oo la muujiyaa inta u dhexeysa da'da lix bilood ilaa saddex sano.
Haddii Malamute uu muujiyo calaamadaha suuxdinta, bilow daaweynta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aad u xakameyso.
Eeyaha sonkorowga qaba waxay u baahan yihiin irbado insulin oo joogto ah maaddaama jirkoodu uusan matagikarin sonkorta dhiiggooda ku jirta.
Jadwal u samee booqashada dhakhtarka xoolaha haddii aad dareentid cunistaada, cabitaanka, iyo kaadi badanidaada Malamute, oo ay weheliso miisaan lumis.
Nimanku waxay leeyihiin cimri dheer, oo arrintan caafimaad waxay ku badan tahay eeyaha waaweyn, sidaa darteed fursadaha kansarka noocan ah ee kansarku ku dhacayaa wuu yara yaraa.
Thanks to technology, sida caadiga ah waxaa lagu daaweyn karaa qalliin ama kemotherabi.
Cilladaan dhiiggu waxay keentaa xinjirooyinka aan caadiga ahayn eeyaha, iyo Malamutes ayaa badanaa lagu ogaadaa markii ay dhaawac soo gaaraan.
Qaarkood waxay ogaadaan oo keliya in xayawaankoodu leeyahay hemophilia kahor qalliinka, maxaa yeelay xayawaanada xoolaha waa inay tijaabiyaan kahor intaysan marin nidaamka.
Kaneecada ku dhacda xaaladan waa inaan la barbaarin maadaama looga gudbi karo hidde ahaan.
Hal shay oo kale oo saameeya eeyaha waaweyn waa cudurada wadnaha. Maluggaaga ku hay jeeg adigoo u oggolaanaya inay sameyso imtixaan sanadle ah.
Eyga Alaskan Malamute wuxuu ku kici karaa meel kasta oo udhaxeysa $ 2,200 iyo $ 6,500 . Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay abtirsiinta waalidka, goobta uu ku dhaqmo iyo caan bixiyaha, iyo tirada cunugyari la heli karo.
Waad filan kartaa 6 ilaa 8 eey oo ku dhex jira qashin , laakiin waxaa jiray diiwaanno ilaa 12 arday .
Kuwa ka yimaadda safka eyga show ayaa ka qaalisan kuwa laga soocay xayawaanka xayawaanka lagu iibiyo iyo kuwa shaqeeya.
Kahor intaadan bixin eeyaha ama saxiixin qandaraas, la kulan waalidkiisa iyo qashinkeeda marka hore. Tani waxay ku siin doontaa fikrad ku saabsan dabeecadda iyo eeyga eeyaha.
Waxaad sidoo kale weydiin kartaa breed diiwaanka caafimaadka eeyaha iyo dukumiintiyada kale ee muhiimka ah si loo hubiyo inay ka caafimaad qabaan taranka illaa iyo markii ay cunugyadu dhashaan.
Way fiicnaan lahayd haddii aad sidoo kale weydiiso inay dib u qaadayaan eyda haddii aadan awoodin inaad daryeesho mar dambe. Bixiye sumcad leh ayaa ka farxad badnaan doona inuu ubadkooda u siiyo guri weligiis ah.
Alaskan Malamute breed & kennels
Haddii aad dareento inaad diyaar u tahay inaad iibsato eeyahaaga Alaskan Malamute oo aad iska leedahay, halkan waxaa ku yaal degello internet oo kooban oo leh Mals iib ah.
Waqooyiga Waqooyiga Alaskan Malamutes (Burton, OH)
Dhalanteed Malamutes (Palmyra, MI)
Kuma xaqiijin karno iibiyayaashan yar yar, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad sameyso cilmi baaristaada oo aad diyaariso a weydiimo si loo hubiyo inaad la macaamilayso abuure mas'uul ah. Intaad onlaynka tahay, waxaad sidoo kale ka hubin kartaa Mals at Suuqa AKC .
Alaskan Malamute eeyo ay korsadaan
Waqtiga intiisa badan, kala-soocyada iskutallaabtu waxay ku dhammaadaan hoyga, laakiin xitaa kuwa la yaqaan 'purebreds' waxay helaan nasiib darro.
Milkiilayaashu waxay leeyihiin sababo kala duwan, waxa murugada leh dadka kale waxay helaan eeyo sida Malamutes oo kale maxaa yeelay waxay u maleeyeen inay fiicnaan laheyd inay yeeshaan eey u eg, haddana iyagu diyaar uma ahan inay la wareegaan oo yeeshaan nooc noocan ah
Taasi waa sababta aan ugu talineyno korsashada qof kasta oo raadinaya xayawaan rabaayad ah. Gaar ahaan haddii aad tahay milkiile ey xilliyeed leh oo ka warqabaya waxa noocani yahay, waad awoodi kartaa fursad labaad siiso malaa'igta dhogorta laga tagay .
Bal u fiirso goobahan samatabbixinta Mals. Qaar ka mid ah xitaa waxay u adeegaan iskudhafka Alaskan Malamute ee laga yaabo inaad ka hesho qurux iyo shakhsiyad ku habboon qaab nololeedkaaga:
Samatabixinta Moonsong Malamute (Boise, ID)
Ururka Badbaadinta ee Alaskan Malamute Illinois (Mt. Prospect, IL)
Badbaadinta Alaskan Malamute ee Waqooyiga Carolina (Creedmoor, NC)
Badbaadinta Aagga Alaskan Malamute ee Chesapeake (Berryville, VA)
Alaskan Malamutes waxay kujiraan 10ka nooc ee eyga ugu xoogan. Waxay jiidi karaan culeysyo ilaa 3,300 lbs (1,500 kiilo).
In kasta oo ay ka gaabinayaan eeyaha kale ee barafka wata, Malamutes wuu safri karaa masaafo dheer sababtoo ah xooggooda iyo adkeysigooda.
Nooca Malamute waa eeyga rasmiga ah ee Alaska.
Haddii aad tahay milkiilaha eyga markii ugu horreysay, waxaad ka heli kartaa Alaskan Malamute inuu noqdo mid baahan oo caqabad ku ah la qabsiga.
Taasi waa sababta aan ugula talineyno iyaga milkiilayaasha khibrada leh iyo qoysaska loo bartay inay leeyihiin eey weyn oo ay yihiin xayawaan ahaan.
Intaas waxaa sii dheer, iyagu waxay leeyihiin jaakado qaro weyn waxaana loo kariyaa jawi qabow , sidaa darteed ma awoodi doonaan inay istaagaan xaaladaha cimilada kulul. Haddii aad ku nooshahay waddan kuleyl ah, tani waxay noqon kartaa biilal koronto oo sarreeya.
Marka laga reebo haysashada heerar tamar sare leh iyo baahiyo habeyn adag, qof kasta oo Alaskan Malamute ah oo horay u dhexgalay isla markaana si ku habboon u tababbaray, iyagu waa eeyaha shaqeeya ee daarta aaminka ah .
Maxaad u malaynaysaa noocaan? Sheeko kasta oo aad rabto inaad wadaagto oo ku saabsan Mal? Wax walba nooga sheeg adoo faallo ka bixinaya xagga hoose.
23 isku darka Alaskan Malamute
Shih Poo: Wax kasta oo aad uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Shih Tzu Poodle Mix
Tilmaamaha buuxa ee Belgian Malinois: 6 Waa inuu Aqriyaa Xaqiiqooyinka
sida loo ogaado in eey uu qandho la'aan yahay heerkulbeeg la'aan
midabada pomeranian cawl-hadhka leh
waa maxay taranka eeyga
pug madow vs fawn pug